११ श्रावण २०७५, शुक्रबार १०:०९ 54 पटक हेरिएको
काठमाडौं : सरकारले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीका सबै माग पुरा गर्ने गरी नौंबुँदे सहमति गरेको छ । यससँगै डा. केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडिएको छ ।
अनलाइनखबरबाट जस्ताको तस्तै साभार गरिएको ।